jikọtara ụdị iyo - China Tianjin Chunyuan Longrun
jikọrọ ụdị iyo
Fatịlaịza na nyo usoro fatịlaịza ma nyo usoro nwere akụkụ nke ntapu ogbugba mmiri n'ubi usoro, fatịlaịza usoro nwere ike inyere ịzọpụta ọrụ na-eri n'ihi na ọ pụrụ ọrụ ọnụ mgbe mmiri. Nyo usoro nwere ike nyere aka ka mmiri doro anya ma na-eme bụghị jam mgbe mmiri. Tianjin Chunyuan Longrun Micro-mmiri ụzụ CO., LTD malitere ya ọrụ na 1998, ma guzosie ike na ụlọ ọrụ na 2000, nke bụ ihe mbụ ụlọ ọrụ aku na mmepụta nke ntapu ogbugba mmiri n'ubi usoro maka azọpụta mmiri ugbo. Afte ...
Min.Order ibu: 10000m
Tụkwasịnụ Ikike: 24,000,000m
Fatịlaịza na nyo usoro
Fatịlaịza na nyo usoro nwere akụkụ nke ntapu ogbugba mmiri n'ubi usoro, fatịlaịza usoro nwere ike inyere ịzọpụta ọrụ na-eri n'ihi na ọ pụrụ ọrụ ọnụ mgbe mmiri. Nyo usoro nwere ike nyere aka ka mmiri doro anya ma na-eme bụghị jam mgbe mmiri.
Tianjin Chunyuan Longrun Micro-mmiri ụzụ CO., LTD malitere ya ọrụ na 1998, ma guzosie ike
ụlọ ọrụ na 2000, nke bụ ihe mbụ ụlọ ọrụ aku na mmepụta nke ntapu ogbugba mmiri n'ubi usoro maka
azọpụta mmiri ugbo. Mgbe about20 afọ mmepe, anyị nwere atọ usoro ugbu a, ntapu ogbugba mmiri n'ubi usoro, ịgba mmiri usoro na ubi mmiri system.The isi ngwaahịa gụnyere ntapu ọjà, Pee ọjà, Pee sooks, nyo usoro, fatịlaịza tank, anwụrụ oyiyi akwa. All n'ime ha nwere gafere ISO 9001 asambodo.
Tupu ịzụta mkpụrụ unu mara ndị na-esonụ ajụjụ, anyị ga-chepụta ntapu ogbugba mmiri n'ubi usoro dị ka ozi gị.
1. The ogologo ya ma obosara nke ala ahụ?
2. Gịnị osisi na ị na-eto?
3. The anya nke n'usoro?
4. The isi iyi nke mmiri, si ọma ma ọ bụ osimiri ka ọ bụ ndị ọzọ?
1.Why iji a ntapu ogbugba mmiri n'ubi usoro?
Azịza: atasị ogbugba mmiri n'ubi usoro bụ a usoro nke nwere ike ime ka ị na-azọpụta mmiri / ọrụ / fatịlaịza.
2.What ụdị ngwaahịa m kwesịrị họrọ maka n'ala m?
Azịza: Ọ na-dị otú ala gị bụ na ihe ị chọrọ ka atụmatụ, ọ bụrụ na ị na-amaghị na ọ nke ọma,
dị nnọọ ịjụ m na-enweghị azụ, i ga-enye gị a aro dị ka ozi gị.
3.Does a usoro na-eri ihe?
Azịza: Ọ bụ adabere na imewe, anyị ga-agbalị kasị mma anyị na-enye gị a haziri na-eri obere ma oru oma.
4. bụla asambodo?
Azịza: ọkọlọtọ: GB / T 17187-2009. ISO9001
5.How banyere gị mgbe-sales ozi?
20years ahụmahụ kpochapụ gị worriers banyere ma nke àgwà na nwụnye.
Previous: centrifugal nyo
Osote: diski nyo
Agricultural atasị Irrigation Iyo
na naa Water Iyo
atasị Irrigation Iyo
Iyo N'ihi mpio anwụrụ ọkụ Factory
Filters N'ihi mmiri Systems
Irrigation Micro Iyo
Irrigation Water Iyo System
Aja Myọcha N'ihi atasị Irrigation
Onwe nhicha Iyo
Water Myọcha Dabara Adaba
Water Myọcha kwesịrị ekwesị nwoke n'ikpere aka
Water Myọcha N'èzí
centrifugal na ntupu nyo
metal 100L fatịlaịza tank
fatịlaịza tank 2
63mm ntupu nyo